भगवानसँग सीधै कुराकानी गर्न भन्दै मन्दिरमा चढाइयो आइफोन सिक्स ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»रोचक खबर»भगवानसँग सीधै कुराकानी गर्न भन्दै मन्दिरमा चढाइयो आइफोन सिक्स !
भगवानसँग सीधै कुराकानी गर्न भन्दै मन्दिरमा चढाइयो आइफोन सिक्स !
By रिता घिसिंग on २९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १०:३८ रोचक खबर
एजेन्सी : तपाइले भगवानलाई महंगा उपहार चढाएको त सुनिएकै होला । प्रायजसो मानिसहरुले भगवानलाई नगद पैसादेखि गहना र कपडा तथा बहुमूल्य सजावटका सामानहरु चढाउने गर्छन। । तर यहाँ एकजना मानिसले भगवानलाई जे चढाएका छन् त्यो अहिलेसम्मकै नौलो छ ।
हालै भारतमा एकजना व्यक्तिले मन्दिरमा भगवानलाई जे चिज चढाए, त्यो देखेर सबैजना चकित परेका छन् । भारतको विजयवाडास्थित सुब्रमण्डा स्वामी मन्दिरमा रहेको दानपात्रमा हालै अहिलेसम्मै नचढाइएको वस्तु फेला पर्‍यो । दानपात्रमा त्यस्तो चिज फेला परेपछि मन्दिरमा तहल्का नै मच्चियो ।
मन्दिरको दानपात्रमा महंगो आइफोन सिक्स एस फेला परेको कुरा मन्दिरका कार्यकारी अधिकृतलाई गराइयो । मन्दिरको दानपात्रमा कसले आइफोन चढायो भन्ने खुलेको छैन । मानिसहरुले अनेक थरी अनुमान तथा हँसिमजाक गरिरहेका छन् ।
कतिपयले चाहीँ भगवानसँग सीधै कुराकानी गर्नका लागि कसैले मन्दिरमा आइफोन चढाएको बताउने गरेका छन् । तर आइफोन चढाउने मानिस र त्यसको कारण चाहीँ अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन ।